Iindaba-Ukuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwento yokwenza mica
I-Mica ligama eliqhelekileyo leeminerali ezilayishwe ngetayitile, ezineempawu zokugquma, ukungafihli, ukumelana nobushushu, ukumelana nokubola, ukwahlula ngokulula kunye nokuhlutha kunye nokugcwala. Isetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso, iiplastikhi, irabha, ukutyabeka, ukuthintela umhlwa, umhombiso, ukuwelda, ukulahla, izinto zokwakha kunye nezinye iinkalo, kudlala indima ebalulekileyo kuqoqosho nakwizakhiwo zokhuselo.
Uphando kunye nophuhliso lwe-mica yokwenziwa
Ngokuka "mica eyenziweyo", ngo-1887, izazinzulu zaseRussia zasebenzisa i-fluoride ukuhlanganisa isiqwenga sokuqala se-fluoropoly mica esinyibilikayo; Ngo-1897, iRussia yafunda imeko yokuyilwa kwamaminerali. I-mica yokwenziwa; I-United States ithathe zonke iziphumo zophando malunga ne-mica eyenziweyo emva kwemfazwe yesibini yehlabathi .Kokoko ukumelana nobushushu obuphezulu, yinto ebalulekileyo yokhuselo kunye netekhnoloji, ilizwe lase-United liqhubekile nophando kule ndawo.
Kwinqanaba lokuqala i-pg China, i-mica yendalo inokukwanelisa uqoqosho lwesizwe kunye nophuhliso. Nangona kunjalo, ngokukhula ngokukhawuleza kwamandla, ishishini le-aerospace, i-mica yendalo ayisenako ukuhlangabezana neemfuno. Amanye amaziko amaTshayina aqala ukufunda imicrosoft synthetic mica.
Amaziko ophando lwezenzululwazi kunye nezikolo, oorhulumente kunye namashishini enza ukuba uphando kunye nokuveliswa kwe-mica eyenziweyo kungene kwinqanaba eliqolileyo kude kube ngoku.
II. Izinto eziluncedo kwimicah eyenziweyo xa kuthelekiswa ne-mica yendalo
(1) umgangatho Esitalini ngenxa ifomula efanayo kunye nomlinganiselo izinto ekrwada
(2) Ukucoceka okuphezulu kunye nokugquma; akukho mthombo wemitha
(3) Ngaphantsi kwensimbi enzima, dibana nomgangatho welizwe laseYurophu kunye neUnited.
(4) ubukhazimlayo High nobumhlophe (> 92), izinto ngeeperile sombala yesilivere.
(5) Izinto eziphathekayo zeeperile kunye nekristale
III. Ukusetyenziswa ngokugqibeleleyo kwemicah eyenziweyo
Kwimveliso ye-mica, kunyanzelekile ukuba kusetyenziswe ngokupheleleyo imicu ezilahliweyo ecaleni kwephepha elikhulu le-mica Nalu usetyenziso olubanzi lwe-mica yokwenziwa njengokulandelayo:
(1) yenza umgubo we-mica
Iimpawu: ukutyibilika Good, cover olomeleleyo adhesion.
Yesicelo: ukutyabeka, yodongwe, anti-umhlwa kunye noshishino lwemichiza.
I-Huajing mica eyenziweyo inokwakha okugcweleyo, ukungafihli kunye nomlinganiso omkhulu wenani, eyona nto ilunge kakhulu kwi-pearl pigment.
(2) Izinto zokwenziwa ze-mica zeseramiki
Synthetic mica ceramics is a kind of composite, which has the benefits of mica, ceramics and plastiki. Inakho ukuzinza, ukugquma okuhle, kunye nokumelana nobushushu.
(3) Baza, iimveliso
Luhlobo olutsha lwezinto zokwambathisa ezingaphiliyo ezinokumelana nobushushu obuphezulu, kunye nokubulala umhlwa.
Inzuzo: ukufakelwa okuphezulu, amandla oomatshini, ukumelana nemitha, ukumelana ne-oxidation njalo njalo.
(4) Synthetic mica ipleyiti yokufudumeza umbane
Esi sisixhobo esitsha esisebenzayo, esenziwe ngokutyabeka umaleko wefilimu ye-semiconductor kwipleyiti yokwenza imicrosoft. Njengempahla yezixhobo zasendlini, ayinamsi kwaye ayinancasa phantsi kobushushu obuphezulu, ke iyasetyenziswa ngokubanzi kwaye iphuhliswe ngokukhawuleza kule mihla.
(5) Synthetic mica pearl sombala
Kuba i-mica eyenziweyo zizinto zokwenziwa, izinto eziluhlaza zinokulawulwa kakuhle. Ke ngoko, isinyithi esinzima kunye nezinye izinto eziyingozi zinokuthintelwa kwasekuqaleni .I-mica eyenziweyo inobunyulu obuphezulu, ubumhlophe, ubukhazikhazi, ukhuseleko, ukungabinetyhefu, ukhuselo lokusingqongileyo, kunye nobushushu obuphezulu obunganyangekiyo. Isikhumba, izinto zokuthambisa, ilaphu, iseramikhi, ulwakhiwo kunye nokuhombisa.